Ndị na-emepụta mmiri Chiller - China Water Chiller Suppliers & Factory
Mmiri Chiller nke nwere
Tọrọ ntọala na 2000, ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe n'ịmepụta mmiri chiller. Anyị mmiri chiller bụ akụkụ nke ihe jụrụ usoro na ike ga-etinyere na ike ịrụ ọrụ na ọnọdụ na-emepụta jụụ mmiri maka ulo oru ojiji.
Ngwaahịa si nkọwapụta nlereanya zuru ezu iji mezuo ihe ubi ngwa ngwa.
Modular imewe, hụ na mmiri chiller na-arụ ọrụ dị elu n'ụzọ dị irè na ala oriri ike.
Shell na tub Type Water Chiller
Shell na Tube Type Water Chiller bụ ezigbo ka ihe jụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ikuku ikuku ikuku. Ngwaahịa anyị na-eji shei idei mmiri na ikuku mmiri na-ekpo ọkụ na ọkụ ọkụ na-agbanwe ọkụ ọkụ, na-enye mgbanwe mgbanwe dị elu na ịdị mfe. Shell na Tube Type Water Chiller bụ nke a na-ejikarị eme ihe na amonia friji usoro na Freon friji usoro.
Alldị-film Waterdị Mmiri Chiller
Alldị ụdị ihe nkiri mmiri na-ada n'ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ nke na-enwe ike ịnye arụmọrụ ọkụ dị elu ma mepụta mmiri ice n'akụkụ 0℃. Ka ọ dị ugbu a, enwere ohere zuru oke n'akụkụ mmiri nke evaporator iji gbochie oyi.
Ike nju oyi: 2374kCal-284,820kCal